Wasiirka arrimaha gudaha oo Muqdisho ka furay shir wadatashi ah | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Wasiirka arrimaha gudaha oo Muqdisho ka furay shir wadatashi ah
Wasiirka arrimaha gudaha oo Muqdisho ka furay shir wadatashi ah
Wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya ayaa la tashi kala sameynaysa maamulka iyo qeybaha bulshada gobolka Banaadir diyaarinta hannaanka dib u heshiisiinta Qaranka.
Shirka qeybtiisa Koowaad ee maanta furmay waxay wasaaradda la-tashi la sameynaysa madaxda iyo dadka ka shaqeeya hey’adaha dowliga ah ee gobolka Banaadir, halka maalinka berri ah wadatashiga ay la yeelan doonto qeybaha bulshada ee gobolka sida uu sheegay agaasimaha guud Wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya Cali Maxamed Maxamuud.
La taliyaha ra’iisul wasaaraha ee arrimaha dib u heshiisiinta Dr, Cabdiraxmaan Macalin Cabdullaahi Baadiyow oo ka hadlay shirka waxa uu sheegay in muhiim tahay in la daadajiyo wadatashiyada diyaarinta hannaanka Qaran ee dib u heshiisiinta dalka.
Guddoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Cabdulaahi Tuulax ayaa tilmaamay in gobolka uu soo dhaweynayo in wadatashiyo lala sameeyo dadka caasimadda.
“Waan soo dhaweynaya wadatashigaan diyaarinta hannaanka Qaran ee dib u heshiisinta, anaga gobolka Banaadir ahaan ahmiyad weyn ayay noo leedahay dib u heshiisiinta waayo hadii ay caasimadu hagaagto dalkoo dhami waa hagaagayaa maadaama ay tahay muraayada dalka”. Ayuu yiri guddoomiye Tuulax.
Wasiirka arrimaha gudaha, federaalka iyo dib u heshiisinta xukuumada federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Maxamed Sabriye oo furay shirka waxa uu sheegay hannaanka dib u heshiisiinta Qaranka sanadkii tagay uu soo bilowday haatana uu marayo waqtigii la tashiga bulshada lagana billaabay gobolka Banaadir.
“Sanadkii tagay 2017 bishii June ayuu soo biloowday wadatashiga hanaanka dib u heshiisiinta dalka wax badan ayaa nooga qabsoomay hada waxaan galnay la tashiga bulshada oo aan ka biloownay dadka gobolka Banaadir si aragtidooda loogu daro hannaankani”. Ayuu yiri wasiir Sabriye
Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa intaa ku daray in wasaaradiisa ay ku dadaalayso sidii loo heli lahaa hannaan dib u heshiisiin Qaran oo leh sal adag kuna dhisan talada bulshada Soomaaliyeed si xal waaro looga gaaro khilaafyada noocyadooda kala duwan ee dalka ka jira.